HUAWEI ONE PRICE REPAIR | HUAWEI Myanmar
ယခုမှ စ၍ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၂၁ အထိ၊ ရှေ့/နောက်မျက်နှာပြင် ၊ စက်ပြား နှင့် ဘက်ထရီ ပြုပြင်ခြင်းများ အတွက် သတ်မှတ်ထားသော အထူးဈေးနှုန်းဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါ သတ်မှတ်အမျိုးအစားများ သည် သတ်မှတ်ထားသော အထူးဈေးနှုန်းများ ခံစားခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
*သတ်မှတ်ထားသော အထူးဈေးနှုန်း ခံစာခွင့်ရရှိသော ပြုပြင်မှုတွင့် အကျုံးဝင်ခြင်းရှိ/မရှိကို Huawei Customer Service Center များမှ အတည်ပြုပေးမည်ဖြစ်သည်။
ရှေ့/နောက်မျက်နှာပြင် ၊ စက်ပြား နှင့် ဘက်ထရီ ပြုပြင်ခြင်းများ အတွက် အထူးသက်သာစေသော ဝန်ဆောင်မှု
အာမခံ ရက်ပေါင်း ၉၀ ရရှိခြင်း
လဲလှယ်လိုက်သော အပိုပစ္စည်းများအတွက် ရက်ပေါင်း ၉၀ အာမခံရရှိခြင်း
ရှေ့မျက်နှာပြင် လဲလှယ်မှု အထူးဈေးနှုန်း ခံစားခွင့် တွင်ပါဝင်သော အမျိုးအစားများ
nova 3e Sakura Pink ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
nova 3i Iris Purple ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
nova3Black/Iris Purple/Gold/Acacia Red ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
nova 2i White/Gold ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
HUAWEI GR5 2017 Black/Silver ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
Y6 Prime 2018 Black/White ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
HUAWEI Y5 2017 Black/Gold ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
Y5Ⅱ Black/Gold ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
HUAWEI Y3 2017 Pink/Gold ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
HUAWEI Y7 2016 Black ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
HUAWEI Y5 Lite White ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
Y6Ⅱ White ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
G Play mini White ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
M3 lite 8 (Chopin) Black ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
M3 8 (Beethoven) Silver/Gold ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
Media Pad T1 10.0 Silver ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
စက်ပြား လဲလှယ်မှု အထူးဈေးနှုန်း ခံစားခွင့် တွင်ပါဝင်သော အမျိုးအစားများ
nova 3, nova 3e, nova 2i, HUAWEI Y5 Lite, HUAWEI Y5 2017, HUAWEI GR5 2017, HUAWEI Y9 2018, HUAWEI Y7 2018, Y6 Prime 2018, HUAWEI Y3 2017, Media Pad T2 7.0, Media Pad T37၃၀,၀၀၀ ကျပ်
နောက်မျက်နှာပြင် လဲလှယ်မှု အထူးဈေးနှုန်း ခံစားခွင့် တွင်ပါဝင်သော အမျိုးအစားများ
nova 3e Black/Blue/Sakura Pink ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
nova 3i Black/Iris Purple ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
nova3Iris Purple/Gold ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
Y6 Prime 2018 Black/Blue ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
HUAWEI Y5 2018 Gold/Black/Blue ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
ဘက်ထရီ လဲလှယ်မှု အထူးဈေးနှုန်း ခံစားခွင့် တွင်ပါဝင်သော အမျိုးအစားများ
Mate 10 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, P10, P10 Plus, P20, P20 Pro, nova2lite, nova 2i, nova 3e, nova 3i, nova 3, nova 4, Y5 Prime 2018, Y6 Prime 2018, Y7 Pro 2018, Y9 2018, Y5 2019, Y9 2019, Y Max, Y6 Pro 2019, Y7 Pro 2019, Y9 Prime 2019 ၁၅,၀၀၀ ကျပ်
ပြုပြင်မှု အခြေအနေ စုံစမ်းရန်
1. Q: အထူးဈေးနှုန်း ရရှိနိုင်သောကာလ ကို ပြောပေးပါ။
A: အထူးဈေးနှုန်း အစီစဉ်ကို ၂၀၂၀ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက် နေ့မှ ၂၀၂၁ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့ထိ ပါဝင်နိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ လက်ကျန်ပစ္စည်းရှိသလောက်သာ ဝန်ဆောင်မှုပေးမှာြဖစ်လို့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြုပြင်ဖို့ နဲ့ မသွားခင်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ သို့မဟုတ် Huawei Hotline (09-689000900) သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းဖို့ အကြံပြုလိုပါသည်။
2. Q: အခြားအရောင်း မြှင့်တင်မှု(Promotion)များ ရှိပါက အပိုပစ္စည်းနှင့်အခမဲ့ ၀န်ဆောင်ခအတွက် အထူးလျှော့စျေး ၀န်ဆောင်မှုကိုတစ်ပြိုင်တည်း ရနိုင်ပါသလား?
A: အထူးလျှော့ဈေးမှာ အနည်းဆုံးဈေးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါသဖြင့် လူကြီးမင်း အနေဖြင့် အပိုပစ္စည်း အထူးလျှော့ဈေးသာ ခံစားခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အခြားသော ထပ်ဆောင်းခံစားခွင့်ကို ပူးတွဲခံစားခွင့် ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။
3. Q: အထူးဝန်ဆောင်မှုဈေးနှုန်းဖြင့် လဲလှယ်ပေးသော အပိုပစ္စည်းများသည် တရားဝင်တင်သွင်းသော ဟွာဝေး ထုတ်ကုန်လား?
A: ယခုအထူးဝန်ဆောင်မှုဈေးနှုန်းဖြင့် လဲလှယ်ပေးသော အပိုပစ္စည်းများသည် တရားဝင် တင်သွင်းသော ဟွာဝေး.ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြု၍ လဲလှယ် ပြုပြင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
4. Q: ကျနော့် ဖုန်းအမျိုးအစား နဲ့ အရောင်ကို ဘာလို့ရှာလို့ မရတာလဲ?
A: လောလောဆယ် သတ်မှတ်ထားသော အမျိုးအစားများကိုသာ အထူးဈေးနှုန်းပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအမျိုးအစားများကိုသာ ဖော်ပြပေးထားခြင်းကြောင့် ရှာမတွေ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းအတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဒီနေရာမှာ နှိပ်၍ သို့မဟုတ် Support App တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
5. Q: အထူးဈေးနှုန်း ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရယူနိုင်လဲ?
A: ဟွာဝေး ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေးပို့ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လက်ကျန်ပစ္စည်း ရှိသလောက် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
6. ကျနော့ဖုန်း အမျိုးအစားက အထူးလျှော့ဈေးထဲမှာပါဝင်တဲ့အတွက် သတ်မှတ်ကာလတွင်း အချိန်မရွေး သွားရောက်ပြုပြင်လို့ ရနိုင်ပါသလား?
A: လက်ကျန်ပစ္စည်းရှိသလောက်သာ ဝန်ဆောင်မှုပေးမှာြဖစ်လို့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြုပြင်ဖို့ နဲ့ မသွားခင်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ သို့မဟုတ် Huawei Hotline (09-689000900) သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းဖို့ အကြံပြုလိုပါသည်။
7. Q: အထူးဈေးနှုန်း ဝန်ဆောင်မှုသည် ဖုန်းအမျိုးအစား အပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်သတ်မှတ်ထားပါသလား?
A: ယခုလိုသတ်မှတ်ချက်မျိုးမရှိပါ။ လူကြီးမင်း အနေဖြင့် အထူးဈေးနှုန်း ၍ဝန်ဆောင်မှု သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လက်ကျန်ပစ္စည်း ရှိသလောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
8. Q: ပြုပြင်ပြီးနောက် ဖုန်း၏ခံနိုင်ရည် ကျဆင်းနိုင်သလား မူလအသစ်အတိုင်း ပြန်ရနိုင်သလား?
A: ဟုတ်ကဲ့ ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောဖုန်းများအနေဖြင့် မူလအသစ်အတိုင်း စွမ်းဆောင်ရည် မရနိုင်ပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရေစိုခံနိုင်မှုစွမ်းရည် ဖုန် သို့မဟုတ် အမှုန်ဝင်ရောက်မှုကို တားဆီးပေးသောစွမ်းရည်များ ကျဆင်းနိုင်ပါသည်။
နံနက် ၇ နာရီ မှ ည ၉ နာရီ အထိ
အွန်လိုင်း အကူအညီ နံနက် ၇ နာရီ မှ ည ၉ နာရီ အထိ
သင့်ဖုန်းအား သတ်မှတ်ထားသော အထူးဈေးနှုန်းဖြင့်ပြုပြင်လိုက်ပါ